Semalt: Basic Types of Hacker Kutambudza uye Nzira Yokugadzirisa A Website
Kuzadzisa zvinangwa zve SEO zvinogona kutyisidzirwa nezvimwe zvinhu, webhusaiti yakokuchengeteka kuva mumwe wavo. Kubuda kwemitambo uye nhau dzinowanikwa mumagetsi ehurumende dzinoda huwandu hwakawanda hwekuchengetedza kuchengetedza matanho.Nhamba dzinoratidza kuti zvinopfuura 10% zvewebsite dzinoenda pasi nekuda kwevaseki uye kurwisa - best kanger mod.
Kuva mutengesi anogutsikana, inofanirwa nekuchengetedzwa kwepaIndaneti nyaya yakawanda. Hiring professionaluye yakanyatsotsvaga SEO yakasimba kusimba rako rekuchengetedzwa kwebasa rekuchengetedza mabasa kunyanya kune nhamba yakanaka yemakambani anoshandisa paIndaneti. Kushanda ne SEOkusimbisa kuvimbisa vatengesi vekuchengeteka kwepamusoro, kutarisa pasi kwevanokwikwidzana, uye chizvarwa chemashure rechokwadi munguva chaiyo. Mukufamba kwenguva, zvakagadzirwavatengesi vanofarira pakuzadzisa zvinangwa zvavo nekusangana nekudzoka kukuru.
Nik Chaykovskiy, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt Dhidhii Dhizinesi, inotsanangura nezvekunyorwa kwehutachiona iwe unoda kushanda.
Kazhinji inonzi yakasvibiswa, kurwisa kwechisimba kunoshandisa varwi vemazuva ano kurwisakuputsa pasi kombiyuta yenyu. Rudzi urwu rwekurwisa runoshandiswa muzviitiko zvisingawanzoitiki. Vatengesi vanoshandisa mapofu ekurwisana kuti vasvike pawebsite yakoTsanangudzo inoshandisa nzira dzose dziripo munyika. Mushure mokunge mawana PC yako, vatengesi vanogona kuwana maakaunti enyu ose uye mapepa emafairaachifamba uye achitarisa pane kuvimbika. Zvisinei, zvakajeka kuona kuti utsinye hunokonzera kushanda sezvo kombiyuta inoita zvakawandayezvinhu zvekuita panguva imwe chete.
Kurwisa simba rekukutura nyore nyore kuona. Kuva nhanho imwe mberi kwevatengi vanobhadhara zvakawanda.Kuti udzivise kutengesa uchishandisa mapofu akasiyana, iwe unogona kugadzirisa gwaro rekuedza, uye uvhare maakaiti kana uchinge usina kubudirira.
Kukurukurirana pakati pewebsite yomugumo wemushandi uye sangano rakabudirira kunogumira kuMITM kurwisa..Vatengesi vanotora mazano ekuchengeteka kwewebsite yenyu kuburikidza nekubvisa kutaura kwemasangano. Munzira iyi yekurwisa, vanotengesa vanotorazvinhu zvose pasina ruzivo rwemushandi wekupedzisira.
MITM kurwisa kudzivirira matanho
Kudzivirira vatambudzi kubva kutora nzvimbo yako yekuchengetedzwa kwewebhu, funga kushandisafirewalls, web site gateways, anti-virus zvirongwa, uye VPNs. Kushandisa kuvharika kwakavimbika pakati pevhareji uye mutengi kunobatsira kudzivirira vatengesi.
Social platform attack
Kazhinji inozivikanwa sehuwandu hwemagariro evanhu, kurwisa kwevanhu kunofungidzirwa sechinhu chiri nyoreNzira yekugadzirisa yakasimba yakasimba. Vashandisi vachishandisa nzira iyi vanoshandisa vashandisi kuti varatidze mapepaji avo uye zvichemo zvekadhi rechikwereti.
Vanotsvaga vane nzira yekushandisa zvinangwa zvavo kuburikidza nekuumba ukama hwakanakanavo. Unyanzvi hwehutano hunogona kudzivirirwa nekukurudzira vanhu pane zvinodiwa zvekuchengetedza ruzivo rwavo rwakanyanya.
Mukurwisana uku, vatengesi vanopesana nehuwandu hwehuchengetedzwa hwewebsite kuburikidza nekushandisaiwe kuti unyore mabhuku akazaruka uye unotsanangurira. Nokuita kudaro, vatengesi vanokuendesai kune webhusaiti yehutachiona iyo inoita kuti iwe uchengetedzwe kuve wakagumburwa.
Kuumba kukurudzira kuvashandi vako pamusoro pekuda kwekuchenjerera paunenge uchishandisainternet yevanhu vose inokosha. Hackers vanoramba vakangwarira nekumirira mushandi kunyoresa software yepachena kubva kune imwe nzvimbo ine njodzi, ndokubva vatyasangano rose. Iva wakangwarira uye uchenjerere paunenge uchishandisa WIFI yevanhu kuti usasungwa.
Kurwiswa kwekune kure kunowanzoshandiswa kuparadzira zvirwere zvinotyisa, kuwana rusununguko rwekunetsekaruzivo, uye kugadzira kuparara kune ma PC.
Kurinda nekudzivirira kusatambura kwewebsite yako kunokuchengetedza kubvahackers. Funga kuisa zvose mukati nekunze IT kuchengetedzwa kuronga kuti igare yakachengeteka.
Kuchengeteka kwepawebsite kwako kunonyanya kukosha kana zvichiitika pakudhindwa kwemajeri uye kwehuwandu hwekutengesa.Nhamba yakanaka dzebhizimusi dzinoenda pasi mwedzi woga woga nekuda kwekurwiswa kubva kune vanotyisa. Hire IT maitiro kuti uchengetedze iwe nekuvandudza uyekudzivirira nzvimbo yako kubva pakuenda pasi semugumisiro wekunyengedza.